Sakafo - izay rehetra tokony ho fantatra mba hihena | Nutri Diet (Pejy 2)
Sakafo tsy matavy
Fantaro ireo sakafo izay tsy mampatavy anao. Legioma, legioma ary voankazo misy kaloria vitsivitsy ary koa mahasalama sy mahavelona.
Mozika hampihena lanja
Jereo ny tombo-tsoa azo avy amin'ny mozika hampihena ny lanja sy hahatratrarana ny tanjon'ny fahasalamana raha ampiarahana amin'ny fiofanana.
Fantaro ny zava-drehetra momba ny sakafo misy ranoka: ny zavatra iombonany, ny isan'ny karazany ao, ny fampiasana azy ireo, ny fitandremana ary maro hafa!
Ianaro ny fomba ahafahanao manomana an'io laoka manadio matsiro io mba hahatsapanao ho kely volo sy ho matanjaka kokoa, ary izy io koa dia famenon-tsakafo tonga lafatra hampihena.
Jereo hoe ahoana ny fomba fiasan'ny sandwich, ny drafitry ny sakafo izay miantoka fa azo atao ny manary lanja nefa tsy miala amin'ny gliosida.
Manolotra menus vitsivitsy izahay mba hahafahanao manary 10 kilao amin'ny fomba voajanahary sy mahasalama indrindra. Ankafizo mandritra ny fotoana laninao lanja sy lanja very.
Lasopy mandoro tavy
Iray amin'ireo lasopy malaza indrindra mampihena ny lanjany ny lasopy mandoro tavy, holazainay aminao ny fomba anaovanao azy sy ny dingana tokony hataony.
Ny sakafo Kosher dia karazan-tsakafo tantanan'ny jiosy, na dia maro aza ankehitriny no mihinana azy satria mahasoa.
Sakafo 1800 kaloria
Mbola tsy mahazatra ny sakafo kaloria 1800? Sakafo voalanjalanja sy isan-karazany izay ho tianao satria tsy hahatonga anao mosarena.
Fantaro ny zava-drehetra momba ny fihinanam-boaloboka: ny fomba fiasan'izy io, izay azo ary tsy azo hanina, ny lesoka ary maro hafa!
Ny sakafo paleo no nampiasain'ny razambentsika, fantaro izay sakafo azonao lanina ary iza amin'ireo no tokony hialanao mba hahazoana tombony amin'izany.
Ny fihinana fianjerana dia izay atao ao anatin'ny fotoana fohy ary manampy ny vatana hihena haingana. Lazainay aminao ny mampiavaka azy!
Raha mbola tsy fantatrao hoe ohatrinona ny sakafon'ny fianjerana dia holazainay aminao eto ambany, safidy tsara very 10 kilao amin'ny fomba mahomby ao anatin'ny roa volana.
Misy sakafo maro, amin'ity indray mitoraka ity dia manome ny sakafon'ilay mizana izahay, fantaro ny fomba ahafahanao manantanteraka izany ary mahazo ilay tarehimarika tadiavinao fatratra.
Latabatra milanja tsara
Fantaro raha toa ianao ka manana lanjan'ny lanja ara-dalàna mifototra amin'ny lanjany tsara, ny fanondroana ny vatan'ny vatana ary ny tabilao avo lenta.
Ny hypothyroidism dia mahatonga anao ho matavy na hihena
Ny hypothyroidism dia fanovana ny fihary tiroida izay miteraka fiovan'ny hormona ary mahatonga antsika hanana lanja mora foana. Mianara mamantatra azy. %
Ny sakafo normoprotein na ny sakafo ketogenika dia tompon'andraikitra amin'ny famoronana ketones izay manampy antsika hihena amin'ny fomba mahasalama.
Ny tsena dia manolotra safidy maro hafa amin'ny siramamy. Fantaro izy rehetra, ary koa ny tombony sy fatiantoka ny tsirairay amin'izy ireo.
Ahoana no manisa kaloria
Fantaro ny fomba fanisana kaloria. Azavainay ny torohevitra sy tetika tsara indrindra hampihenana ny lanjanay amin'ny fanisana ny kaloria amin'ny sakafonareo.
Ny sakafo Okinawan dia mihoatra ny sakafo, fomba fiaina iray izay manampy ireo izay manao izany hampitombo ny androm-piainany, fantatr'izy ireo ny loharanon'ny fahatanorana.
Fantaro ny momba ny sakafo 5: 2. Ahoana ny fomba fiasa, ny fahombiazan'ny fihenan'ny lanja, ny hanina amin'ny andro fifadian-kanina ary inona ny fihenan-tsasatra.
Lazainay aminao ny fomba fiasan'ny sakafo 13 andro na ny sakafo NASA hampihenana lanja eo anelanelan'ny 6 ka hatramin'ny 10 kilao ao anatin'ny roa herinandro.
Sakafo proteinina hanary lanja
Fantaro ny fomba fiasan'ny sakafo proteinina, ny sakafo tafiditra ao anatiny, ny isan'ny dingana misy azy ary ny fanontaniana lehibe mifandraika amin'izany.
Fanasitranana ny toetra ampongabendanitra: voankazo misy kaloria ambany
Ny ampongabendanitra dia iray amin'ireo voankazo izay tsy matavy loatra ankehitriny ary atolotry ny dokotera noho ny fanasitranana sy ny tombony azo avy aminy.
Ny lasopy mandoro tavy dia azo inoana fa fantatry ny besinimaro indrindra, mahavelona ary manampy antsika hihena haingana ao anatin'ny herinandro monja. Fantaro ny tetika tsara indrindra hanatanterahana azy.
Raha mitady ho very tavy sy hihazona hozatra ianao dia soraty izay tombony azo amin'ny fanaovana an'io fifadian-kanina miserana io.
Fetsy hanafoanana ny hanoanana
Ianaro ireo torohevitra sy tetika tsara indrindra hanafoanana ny hanoanana amin'ny fomba mahasalama. Ahoana no tokony hamoronana ny sakafo, inona ny lesoka tokony hialana, sns.
Mitovy amin'ny fihenan'ny tavy ve ny fihenan-danja?
Azavainay ny antony ilana ny mianatra manavaka ny fihenan'ny lanja sy ny fihenan'ny tavy, ny fizotrany roa izay tsy mifanindran-dalana.
Fahadisoana telo mety hahatonga anao hahazo lanja amin'ny ora fisakafoanana
Raha tsy te-hahazo lanja ianao noho ny sakafo antoandro dia telo amin'ireo lesoka lehibe tokony hiezahanao hialana.
Ny sakafo rehetra tsy misy lafarinina. Lazainay aminao ny tombony sy ny vokany amin'ny fahasalamanao amin'ny fanaovana sakafo tsy misy mofo.
Fantatrao ve ny tombony azo avy amin'ny voanjo na voanjo? Ampidiro ary fantaro ny antony mahatonga ny fanjifany tena tsara ho an'ny vatantsika.
Ny akondro sy ny ronono dia fitambarana proteinina tsara. Jereo ny tombony azo avy amin'ity fisotroana ity sy ny fomba fanomanana azy hankafy ny tsirony.
Te ho very kilao vitsivitsy ve ianao miaraka amin'ny vary amin'ny fihinana tuna? Jereo ny toetran'ireo sakafo roa ireo izay hanampy anao hamoy ireo kilao fanampiny ireo
Fantaro ny fomba hahafoana kilao amin'ny fomba mahasalama amin'ny sakafo kaloria 500. Milanja ambany tsy misy ezaka sy azo antoka. Ny sisa hataonao dia ...
Tombony sy fatiantoka amin'ny sakafo vegan manta
Ny sakafo vegan manta dia mahazo vahana, na izany aza, afaka mahita fatiantoka vitsivitsy isika ao, mianatra ny mahatsara sy maharatsy azy.
Mety mahasalama ve ny fihinanana snack eo anelanelan'ny sakafo?
Ny fihinanana snack eo anelanelan'ny sakafo dia manana laza ratsy tokoa, fa raha ataonao araka ny hazavainay eto dia mahasalama izany ary mety hanampy anao hihena aza.
Maninona ianao no mila mitazona ny vatanao hampihena ny lanjanao?
Ny fitazonana ny vatanao mihetsika dia zava-dehibe toy ny fihinanana sakafo mahasalama rehefa te hihena ianao. Eto izahay dia manazava ny antony sy ny fomba hanaovana izany.
Karbohidraty - Inona no fetra amin'ny sakafo antoandro?
Ny sakafo atoandro dia tokony ahitana gliosida, na ho an'ny fihenan-danja sy ny fikojakojana. Fa firy? Eto isika dia miresaka momba ny grama sy ny isan-jato.
Ahoana ny fijanonana milahatra rehefa misakafo any ivelany
Ny fihinanan-kanina dia mety hiafara amin'ny famoahana be loatra anao matetika, saingy misy fikafika fikojakojana ny kaloria sy fijanonana milahatra.
Izay tsy tokony hataonao raha te hanafainganana ny metabolisma ianao
Raha miezaka ny hanafainganana ny metabolismanao ianao handoroana kaloria bebe kokoa dia ireto ny sasany amin'ireo lesoka lehibe indrindra tokony hialana.
Maninona ny ranom-boankazo no tsy anisan'ny sakafo mahasalama?
Ny ranom-boankazo dia tsy tokony hiditra amin'ny sakafo ara-pahasalamana raha ny filazan'ny manam-pahaizana maro. Eto no hanazavana ny antony.
Sakafo maivana tsara telo ho an'ny fahavaratra
Manolotra hevitra snack telo mety tsara amin'ny fahavaratra izahay noho ny fahatsorany, ny kaloria ambany ary, amin'ny toe-javatra sasany, ny toetrany mamelombelona.
Izay tokony sy tsy tokony hohaninao mba hahazoana kibo tonon
Raha te-hahazo kibo nonoina ianao, na farafaharatsiny mendri-piderana, dia hazavainay eto ireo sakafo tokony hialanao ary tokony hohaninao isan'andro.
Maninona raha tsy misakafo (na dia tsy noana aza ianao)
Tsy mety ny misoroka sakafo, na dia tsy noana aza ianao. Eto izahay dia manazava ny antony sy ny fomba hisorohana ny tsy fahampian-tsakafo.
Ahoana ny fomba hanapahana kaloria be dia be avy amin'ireo burger-nao
Manazava tetika efatra izahay hanakanana kaloria betsaka amin'ny burger anao mba hahafahanao manohy mankafy ity sakafo ity.
Safidy efatra salama amin'ny mayonnaise
Jereo hoe inona ny safidy ara-pahasalamana tsara indrindra mba mayonnaise hanapahana kaloria amin'ny sandwich misy anao.
Ahoana ny fomba hanombohana very lanja amin'ny tongotra ankavanana
Raha te hihena ianao dia hazavainay eto ny antony tokony hanaovanao izay rehetra azonao atao mba hiala amin'ny tongotra ankavanana.
Inona no anjara asan'ny ghrelin sy leptin amin'ny fihenan'ny lanja?
Azavainay ny atao hoe ghrelin sy leptin ary nahoana izy ireo no heverina ho singa roa tena ilaina amin'ny fihenan'ny lanja sy ny fikojakojana ny lanjany.
Fetsy hialana amin'ny fihinanan-kanina amin'ny sakafo hariva
Ny fihinanan-kanina amin'ny sakafo hariva dia fahazaran-dratsy manimba ny endrikao sy ny fahasalamanao. Eto dia manolotra anao ny sasany mahomby fanafody.
Torohevitra amin'ny fanaovana sandwich miaraka amin'ny kaloria kely
Araho ireto torohevitra ireto raha te hanao sandwich kely misy kaloria ambany ianao, izay hanampy anao hitandrina ny lanjanao sy hihena.
Inona no hohanina amin'ny sakafo maraina mba hijanona ho feno maraina
Ireto misy hevitra tsara indrindra hijanonana ho maraina tontolo andro noho ny sakafo maraina.
Fomba ahazoana lanja amin'ny fomba mahasalama
Ny fihenan-danja ara-pahasalamana aorian'ny fandidiana na olana ara-pahasalamana hafa dia azo atao raha manaraka ireto torohevitra tsotra ireto ianao.
Misy antony lehibe tokony handaminana ny diabe fisakafoanana antoandro
Raha te hihena ianao, ny fandaharanao ny dianao amin'ny ora fisakafoanana dia fihetsika feno fahendrena. Jereo hoe maninona eto.
Fa maninona no mahasalama ny fo ny sakafo tsy mihinan-kena?
Azavainay ny sasany amin'ireo antony mahatonga ny fanarahana ny sakafon-tsakafo dia fanapahan-kevitra feno fahendrena avy amin'ny fomba fijery ara-pahasalamana.
Dite fotsy fotsy iray kapoaka isan'andro dia afaka manampy anao hihena
Ny fisotroana dite fotsy dia mety hanampy anao hihena. Jereo hoe impiry no tokony raisina izany ary inona no mahatonga azy io ho mpiara-miasa amin'ny kilao fanampiny.
Fitsipika telo momba ny fihenan'ny lanjany
Azavainay ny fomba hampihenana andraikitra mavesatra sy ny antony maha-zava-dehibe ny hanaovana izany fa tsy hitady vokatra sy valiny mahagaga.
Fahazarana efatra isan'andro hahatsapa ho maivana
Ireo tetika efatra ireo dia manampy anao hahatsapa ho maivana kokoa mandritra ny andro, ary mailaka sy mora tanterahina koa izy ireo.
Fantatrao ve ny vokatry ny mangosteen na mangosteen? Raha tsy izany dia fantaro fa iray amin'ireo voankazo mahasalama indrindra izy ary misy tombony maro
Ny vola mety indrindra amin'ny sakafo antoandro (raha te hihena ianao)
Izahay dia manazava ny habetsaky ny gliosida, ny fibre, ny proteinina, sns.
Sakafo makrobiotiota inona izany?
Ny fihinana makrobiôzika dia safidy tsara hafa hitazonana vatana sy saina salama. Atambaro ny ara-pientanam-po sy ara-panahy amin'ny ara-batana.
Ireo akora efatra izay tsy tokony ampidirinao amin'ny malama
Raha tianao ho salama sy ambany kaloria ny malama (raha azo atao) dia aza ampiana ireo akora efatra ireo.
Sakafo efatra tokony hialana alohan'ny hatory
Ireo no sakafo tokony hialana alohan'ny hatory, mba hahitana torimaso tsara ary hitazomana ny lalana.
Ny mahatsara ny fihinanana sakafo fihinana siramamy ambany
Raha efa nieritreritra ny hihinana sakafo ambany-siramamy ianao dia ireto misy tombony ara-pahasalamana asehon'izany.
Maninona i Hummus no manampy anao hihena?
Azavainay ny antony mahatonga ny hummus, ankoatry ny fahaiza-miasa sy mora omanina, dia iray amin'ireo sakafo tsara indrindra hampihena ny lanjany.
Sakafo 18 manome fahafaham-po ny filan'ny nofo ary ambany kaloria
Manolotra anao hevitra tsara 18 izahay hanina kely eo anelanelan'ny sakafo. Sakafo mahafa-po ny kalitaonao hatramin'ny kaloria 50.
Fika XNUMX hanakanana kaloria rehefa mahandro
Manazava tetika efatra mahomby be izahay hanakanana kaloria rehefa manomana ny sakafonao sy mandrefy ampahany.
Ny fomba fihinanana hena kely kokoa hanakanana kaloria ary hamonjy ny planeta
Raha te hihinana hena kely ianao - zavatra mahasoa na ho an'ny fahasalamanao na ho an'ny planeta - ampiharo ireo fomba telo ireo.
Sakafo hihazonana fo salama
Zava-dehibe ny fandraisana sakafo ara-pahasalamana hitazomana fo matanjaka ary lavitra ny aretim-po, arrhythmia na aretim-po kardia.
Fanapahan-kevitra 3 amin'ny Taom-baovao izay hevitra ratsy be
Azavainay hoe inona ny fanapahan-kevitra 3 ratsy indrindra amin'ny Taom-baovao izay azonao atomboka amin'ny sary sy ny fahasalamana ary ny antony.
Fanapahan-kevitra 7 taona vaovao salama izay ho azonao tazonina
Raha te hanana fahasalamana tsaratsara kokoa ianao amin'ny taona ho avy dia mila manamboatra fanapahan-kevitra mora tazomina amin'ny Taom-baovao ianao, toy ireo izay hazavainay eto.
Izay tokony sy tsy tokony hohaninao mba hanafoanana ny tavy amin'ny kibo
Raha te hanafoana ny tavy amin'ny kibo ianao mba hahatratrarana endrika manintona kokoa, eto dia hazavainay izay tokony sy tsy hohanina.
Ahoana ny fomba hikajiana mora foana ireo ampahany hialana amin'ny fihinanan-kanina
Ireo fomba dimy mora isaina ny ampahany ireo dia hanampy anao tsy hihinan-kanina loatra ary noho izany dia hampihena ny lanjanao indray mandeha.
Fahazarana kely 15 izay manampy anao hahatratra ny lanja tianao
Ireo fahazarana kely isan'andro dia hanampy anao hahatratra ny lanjanao tadiavina indray mandeha ary ho an'ny rehetra raha efa ela ianao no nanandrana ary tsy mahita valiny.
Raha hihena ny lanjanao dia tsy manomboha manomboka izao?
Raha anisan'ny fanapahan-kevitry ny Taom-baovao ny fahaverezan'ny lanjanao na ny fiainanao mahasalama, dia hazavainay eto ny tombony azo amin'ny fanombohana izao.
Ny volamena dia manapaka ny fisaka ny kibo indray mandeha
Ireto fitsipika volamena efatra ireto dia hanampy anao hahita fahombiazana raha ny handratra ny kibonao indray mandeha no tanjonao.
Tetika 4 surefire hanafainganana ny metabolismanao sy hampihena ny lanjanao
Ireo tetika efatra tsy adala ireo dia hanampy anao hanafainganana ny metabolisma ary hanomboka handatsaka ireo tavy matavy izay manohitra anao.
Ny fomba fihinanana mba tsy ahazoana lanja
Ny fampiharana ireo fikafika ireo dia hanampy anao tsy hampihena ny lanja amin'ny sakafo, satria mifantoka amin'ny fisorohana ny fihinanana tafahoatra na ny fihinanana tafahoatra.
Fetsy mahafinaritra 3 hampihena ny lanjan'ity fararano ity
Ny fanandramana ireto torohevitra sy fika manaraka ireto mifandraika amin'ny sakafo dia hanampy anao hampihena ny lanjanao amin'ity fararano ity.
Maninona ny fampidirana legume amin'ny sakafonao no fanalahidin'ny fahaverezan'ny lanja
Mihinana legume amin'ny fanalahidy mba hitazomana ny tsipika sy hampihena ny lanja. Eto izahay dia milaza aminao ny antony mahatonga azy ireo ho tsara amin'ny fisorohana ny lanjany be loatra.
Very 1 kilao ao anatin'ny 1 andro? Ity dia sakafo natokana ho an'ireo olona rehetra mila very 1 KG ao anatin'ny iray andro ary mamontsina ny kibony.
Fomba mora 3 hampihenana ny siramamy ampiana
Ny fanafoanana ny siramamy ampiarahina mampidi-doza amin'ny sakafo dia tena sarotra, na dia eo aza ny fampiharana ireo fikafika ireo dia hanampy anao hampihena be ny fihinanana.
Ronono mete, mety tsara amin'ny fihenan-danja
Azavainay ny tombony sy fatiantoka ny ronono cashew, ny farany tafiditra amin'ny fitomboan'ny ronono tsy ronono.
Zavatra tsy tokony ho banga amin'ny sakafo maraina, sakafo atoandro ary sakafo hariva handoroana tavy bebe kokoa
Azavainay ny fomba hanafainganana ny metabolismao amin'ny sakafo maraina, atoandro ary sakafo hariva mba handoroana tavy bebe kokoa sy hahatratraranao haingana ny lanja tadiavinao.
Rahoviana sy ahoana no mihinana paoma hampiroborobo ny fihenan-danja
Manampy anao hampihena ny paoma ny paoma, fa ho tsikaritra ny valiny dia tsy ny zava-dehibe ihany no zava-dehibe, fa ny fotoana sy ny fomba.
Sakafo latsaka 5 ambony ho an'ny fihenan-danja
Ny fampidirana ireo sakafo latsaka dimy amin'ny sakafonao dia hanampy anao hihena. Ho fanampin'izany, hihatsara koa ny lafiny hafa amin'ny fahasalamanao.
Sakafo 5 handefasana ny kibo amin'ity fararano ity
Ny fahatsapana ho toy ny balaonina dia goavambe amin'ny lafiny rehetra. Ny fampidirana ireto sakafo dimy ireto amin'ny sakafonao amin'ity fararano ity dia hanampy anao hampihena ny kibonao.
Maninona ny torimaso tsara no manampy anao hilahatra?
Ny torimaso tsara (eo anelanelan'ny 7 sy 9 ora isan'andro) dia iray amin'ireo fototra hahatratrarana na hitazomana vatana mahia. Eto no hanazavana ny antony.
Fomba fanaovana mofo tsy matavy
Ireto torohevitra momba ny habetsahan'ny lanja mahavelona ireto dia ahafahanao manohy mihinana mofo na dia te hihena aza ianao.
Rano voaloboka hahazoana ny lanja tadiavinao
Ny rano voaloboka dia afaka manampy anao hahatratra ny lanja tianao. Eto izahay dia manazava ny fomba fanomanana azy sy ny fomba hanararaotana azy io mba hitrandrahana tsara azy io.
Sakafo 3 manakana anao tsy hihena
Ny fijanonana amin'ny fihinanana ireo sakafo telo ireo, izay misy amin'ny sakafo haingana, dia ilaina mba hanombohana lanja.
Ahoana ny fihinanana karbôzôra ary hijanonana milahatra
Ny fihinana karbaona sy ny fijanonana milahatra dia tsy utopia. Zavatra roa mifanentana izy ireo, na dia tsy maintsy raisina aza ireo torohevitra ireo.
Zava-pisotro telo mitovy na mahomby kokoa noho ny rano voasarimakirana
Tsy tianao ny asidra? Ireo zava-pisotro telo ireo dia mitovy na mahomby kokoa noho ny rano voasarimakirana ho an'ny fihenan-danja.
Fahazarana dimy isan'andro izay mamono ny metabolismao
Ireo fahazarana dimy isan'andro dia matetika ao ambadiky ny metabolisma miadana. Raha tianao hiasa amin'ny fahaizany feno izy dia atombohy amin'ny fanovana azy ireo.
Sakafo matavy hohanina na dia te hihena aza ianao
Zava-dehibe ny sakafo matavy rehefa te hihena ianao. Ny fanaovana tsinontsinona azy ireo dia mety hiteraka fikatsoana. Eto isika dia miresaka momba ny anarana sy ny ampahany.
Antony 4 haka voa chia raha te hihena ianao
Ireo no antony efatra voalohany tokony ampidirinao ao anaty sakafo ny voan'ny chia raha toa ianao ka mitady hihena.
Nahoana ny fo hemp no tsara amin'ny fihenan'ny lanja?
Ny fo hemp dia afaka manampy anao hamoy ireo kilao fanampiny. Eto izahay dia manazava ny antony mahatonga azy ireo ho tsara amin'ny tsipika.
Fahazarana dimy izay manampy amin'ny fampihenana ny cellulite
Ny isan-jaton'ny vehivavy dia manana cellulite. Na dia tsy azo atao aza ny manala azy tanteraka, ireo fahazarana mahasalama ireo dia manampy amin'ny fampihenana azy.
Ahoana ny fomba hampihenana ny tavy kibo indray mandeha
Te hampihena ny tavy kibo ve ianao fa tsy hamerina azy? Ampidiro eo amin'ny fiainanao ireo fahazarana telo ireo, mifandraika amin'ny fanatanjahan-tena, sakafo ary ny saina.
Zavatra tokony sy tsy tokony hohaninao mba hampihenana ny tavy amin'ny kibo
Manolotra anao ny lisitry ny zavatra tokony sy tsy tokony hohaninao raha te hampihena ny tavy kibo ianao mba handokafana kokoa ny akanjo amin'ny vatanao.
Marina ve fa mahatonga anao mahia ny tantely?
Ny tantely dia vokatra tena sarobidy ary efa napetrakay nandritra ny fotoana elaela fa ny fihinanana azy dia afaka manampy anao hihena sy hamoy habe
Ahoana ny fandaniana mikraoba voa mandritra ny sakafo?
Ny mikraoba varimbazaha dia famenony tonga lafatra raha te hihena ianao. Ny fananana ao anatin'ity serealy ity dia manampy ...
Torohevitra hamoahana abs Kronenburg
Na eo aza ny resaka momba ny abs Kronenburg, azo inoana fa voan'ny hatavezina ilay olona ...
Sakafo "sakafo" 3 manakana anao tsy hihena
Ireo sakafo "fihinanan-kanina" ireo dia mampitombo lanja anao na manakana anao tsy hahavery ny kilao fanampiny. Jereo hoe iza izy ireo ary ahoana ny fanoloana azy ireo.
Antony 4 hihinanana voanio raha te hihena ianao
Manome anao antony 4 hihinanana voanemba izahay raha te hihena, mitazà foana na manatsara ny fahasalamanao hahatsapa ho matanjaka sy be fanantenana.
Inona no azonao atao ao amin'ny trano fisakafoanana rehefa misakafo ianao
Mandritra ny vanim-potoanan'ny fitondrana, ny trano fisakafoanana, izay mitovy dika amin'ny fakam-panahy faran'izay mafy, matetika no ozin'olona. Raha ny marina, a ...
Sakafo 3 manafoana ny fahazotoan-komana voajanahary
Ny fampidirana ireo sakafo manakana ny fahazotoan-komana amin'ny sakafonao dia manakana ny filan'ny nofo sy mitazona ny hanoanana, lafiny roa lehibe amin'ny vatana salama.
Zavatra 5 tokony hataonao alohan'ny hanombohana sakafo
Ny fanaovana ireo zavatra 5 alohan'ny hanombohana sakafo dia hanampy anao hifantoka sy handrisika amin'ny asa sarotra amin'ny fahaverezan'ny lanja.
Torohevitra hanamafisana ny hoditry ny kibo ary handoro tavy
Mba hahafahana manamafy ny hoditra dia ilaina ny mitandrina amin'ny sakafo mba tsy hahazoana lanja sy hanangona tavy be loatra ...
Torohevitra hanafoanana ny tavy miverina
Ireto toro-hevitra ireto dia tsy mety diso raha ny amin'ny fanesorana tavy tsy voahangona avy any aoriana sy fanaovana akanjo fahavaratra no tsara kokoa.
Ny teny hoe ketôgônia dia manondro ny fanjakan'ny ketosis izay anaovan'ny vatana ny ankamaroany ...
Ny fomba mahasalama indrindra mahandro trondro
Misy fomba maro hanefena trondro. Ireo dia miovaova arakaraka ny karazana fitaovana ampiasaina ...
Ny firafitry ny sakafo maraina mety hihena
Ny tsy fihinanan-kanina sy ny fisorohana ny sakafo tsy fomba tsara indrindra hampihenana lanja. Amin'ny toe-java-misy manalefaka, ...
Torohevitra hampihenana lanja amin'ny kiwi
Ao amin'ny sakafo dia misy vondrona fantatra amin'ny hoe kaloria ratsy. Tsy midika izany fa avelan'izy ireo hihena ianao, satria ...
Fa maninona no zava-dehibe ny mihinana sakafo misy tavy amin'ny fibres mba hampihena ny lanja?
Azavainay ny antony maha-zava-dehibe ny fihinanana sakafo manankarena amin'ny fibre rehefa te hihena ianao na hitazona ny filahanao.
Ahoana ny fomba hampihenana lanja noho ny akupunktur?
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny mitady manam-pahaizana manokana azo atokisana, ary amin'ny ...
Ireo akora sy zava-mamy hamerana ny fihinanana siramamy
Ny siramamy dia hatraiza hatraiza, ary tsy amin'ny toerana inoana azy matetika. Tsy mora ny mifantina zavatra amin'ireo ...
Mbola iray ihany, fa tsy izay ihany, raha andevozin'ny frezy ianao dia izao no sakafonao satria ao anatin'ny telo andro monja dia hihena mihoatra ny roa kilao ianao
Ny fomba mahomby indrindra hanosehana ny kibo
Raha te-hanadidy ny kibonao indray mandeha ianao dia manafika ny tavy amin'ny kibo avy amin'ny lafiny samihafa araka ny voalaza eto.
Izay tokony ho ao an-tsainao alohan'ny hanombohana sakafo
Izay rehetra tokony ho fantatrao mba hahomby tokoa ny sakafo hanombohanao ary ahatratra ny tanjonao nofinofy ianao
Sakafo 4 hampihena ny lanjany amin'ny lohataona
Ireo sakafo matsiro ireo dia hanampy anao hampihena ny lanjanao amin'ny lohataona na hijanonana milahatra hijerena tsara indrindra amin'ny akanjo fandroana amin'ny fialan-tsasatra.
Ataovy anio mba hahatsapanao fa tsy dia miroborobo be (sy manify kokoa) rahampitso
Ny fampiharana ireo torohevitra ireo mandritra ny 24 ora dia hanampy anao hahatsapa ho tsy dia be volo raha vao ampitso.
Torohevitra telo momba ny sakafo mba hialana amin'ny fahazoana lanja amin'ny lohataona
Raha tsy te hanana lanja amin'ny lohataona ianao dia jereo ireto toro-hevitra momba ny sakafo ireto izay ahafahanao mitazona ny tsipikao mandritra ny fahavaratra.
Longevity - Ny torolàlana momba ny sakafo japoney dia manitatra fiainana
Araka ny fanadihadiana iray vaovao, ny fanarahana ny torolàlana momba ny sakafo japoney dia manome faharetana amin'ny alàlan'ny fampidinana ny mety ho faty amin'ny antony rehetra.
Ny fahaverezan'ny lanja miandalana dia azo antoka kokoa
Mihamaro ny vehivavy resy lahatra amin'ny filàna mampihena ny lanjany, matavy ...
Ahoana ny fampiharana crème anti-cellulite?
Ny menaka anti-cellulite dia natao hampiroborobo ny fandravana ny nodules an'ny tavy, ranon-javatra ary poizina manangona ...
Frangula noho ny fitohanana tsindraindray sy ny fihenan-danja
Betsaka ny anana izay manampy antsika amin'ny làlantsika lavitry ny fihenan-danja, ny iray amin'izany dia ny frangula, tena laxative voajanahary.
Torohevitra hanoloana siramamy amin'ny zava-mamy
Na dia mamy amin'ny sakafo mitovy aza ny siramamy sy ny zava-mamy, ny lanjany dia tsy ...
Tsara ve ny manafoana tanteraka ny sakafo haingana amin'ny sakafo?
Ratsy ho anao ny sakafo haingana, fa ny fanesorana azy tanteraka amin'ny sakafonao dia vao mainka maniry anao bebe kokoa. Eto izahay no manazava izay tokony hatao.
Raha te ho very kilao fanampiny ianao ary hampideradera ny vatanao, dia aza hadino ny tombony sy fatiantoka entin'ny sakafo Perricone malaza.
Ny fandoroana kaloria dia tsy maintsy hijaly, na dia kely fotsiny aza. Ny fahaverezan'ny lanja dia tsy mora ary tsy maintsy mijanona amin'ny fanazaran-tena sy ny sakafo tsara ianao
Ahoana ny fomba hahavery ny tavin'ny tarehy ho tsara tarehy kokoa
Manana saokany roa na takolaka mangotraka ve ianao ka te-hialana? Ho hitanao eto ireo torohevitra azo ampiharina mba hahaverezana tavy amin'ny tarehy.
Ny sakafo Dukan
Ny Diet Dukan no sakafo malaza indrindra ankehitriny. Aza adino ny antsipiriany momba ny mahatsara sy maharatsy azy ary raha toa ka tena mendrika izany. Jereo ny tsiambaratelony !!
Torohevitra mba hihinanana kely kokoa
Raha te hijanona tsy hihinana sy hifehy ny fihinanao ianao dia manolotra toro-hevitra azo ampiharina mba hahatratrarana azy….
Ny frezy hampihena ny lanjan'ity sakafo ity
Ny frezy maniry amin'izao fotoana izao dia mety tsara amin'ny fandoavana kilao fanampiny. Drafitra mampihena lanja mazava izay hamelombelona anao.
Ny regimen isan'andro
Ny regimen amin'ny andro hafa dia fomba fisakafoanana vaovao natao hampiroboroboana ny fihenan-danja. Base…
Ny regimen krononématika
Ny fitondrana krononisialy dia manome soso-kevitra ny sakafo maraina sy ireto sakafo maivana manaraka ireto: ny sakafo maraina amin'ny 8 maraina dia ...
Araraoty ny fiainanao hankafizanao ireo tombony rehetra ireo
Tianao ny sakafo masiaka? Jereo eto hoe inona ny vokatra mahasoa ateraky ny dipoavatra mainty na ny fisintahan'ny Tabasco eo amin'ny vatanao.
Dite matcha hanala sy hampihena ny lanjany
Ny dite matcha dia manampy amin'ny fanapoizinana ny vatana ary hampihena ny lanjany. Eto isika dia handinika lalina kokoa an'ireo olana ireo ary hanasongadinana ireo tombontsoa hafa.
Ny artichoke, sakafo hampihena ny lanjany ao anatin'ny fitondrana
Ny artichoke dia sakafo mampihena, atolotra raha toa ka misakafo. Tsy misy afa-tsy kaloria 80 isaky ny ...
Torohevitra hampihenana ny fihary mammary an'ny lehilahy
Soso-kevitra ny manatona dokotera mba hamaritana ny antony tsy fitovizan'ny tratra. Ny antony mety ...
Fangaro 4 izay matavy be mihitsy na dia toa tsy toa izany aza
Jereo hoe iza na iza amin'ireto akora ireto izay mampatavy be anao no laninao matetika sy inona no hatao mba tsy hampidi-doza ny silhouette anao.
Torohevitra azo ampiharina amin'ny fanarahana ny fomba fihenan'ny lanjany
Manodidina ny 80% ny vehivavy no mijery ny lanjany ary manara-maso tsara ny sakafony, ary araka ny fanadihadiana sasany, ny roa ampahatelony ...
Ny sakafo alkaly
Fantaro ny fomba hampihenana lanja amin'ny alikaola. Mianara momba ny sakafo misy alikaola sy asidra ho an'ny pH tsara, fahasalamana tsara ary endrika tsara. Salama!
Mampihena lanja avy hatrany amin'ny fanapahana kaloria
Azavainay ny fomba fanapahana ny fihinanana kaloria mba haharitra mandritra ny herinandro ny ambaratonga dia hita eo anelanelan'ny 0.5 sy 1 kg latsaka.
Fantaro ny fomba Naturhouse
Ny fomba Naturhouse dia mety hanombohana ny taona hanatanterahana ny fanapahan-kevitra amin'ny Taom-baovao, hanatsara ny fahasalamana amin'ny alàlan'ny fianarana fahazarana misakafo tsara
Maninona ny torimaso tsara kokoa no manampy anao hanana vatana mahia?
Azavainay amin'ny antsipiriany ny antony maha-zava-dehibe ny torimaso tsara raha ny amin'ny hahatratrarana vatana mahia kokoa.
Mba hihena, ireo no lesoka lehibe indrindra azonao atao
Raha te handany lanja amin'ny fomba mahasalama ianao ary tsy hamerina azy intsony intsony, dia aza atao ny manao ireo lesoka izay hazavainay eto.
Nisongadina hatrany ny sakafon'ny Atkins, jereo raha jerena ny fototr'ity sakafo proteinina mampiady hevitra ity
Seleria, legioma mety hampihena ny lanja
Seleria dia misy rano 94%. Sakafo tonga lafatra noho izany ny fampidirana azy amin'ny sakafo, satria vitsy ny kaloria ao aminy ary manohana ny fanafoanana ny poizina.
Ahoana no hifehezana tsara ny sakafo fety?
Mandritra ny fialantsasatra dia matetika no eritreretina ny hisakafo izay be loatra, be tavy, ary toaka be. Na izany aza, azo atao ny manantena ny ampitso, izay matetika sarotra, amin'ny alàlan'ny fampiharana tetika vitsivitsy.
Ny sakafo mananasy dia mamela anao hanary kilao fanampiny fanampiny haingana. Eto ianao dia manana izay rehetra ilainao mba hanarahana tsara ny sakafo.
Alohan'ny hanombohana sakafo
Ny dingana teo aloha tokony ho fantatrao na raisinao alohan'ny hanombohana sakafo, ny fahatsapana mahazatra miaraka amin'ny fizahana fitsaboana dia hanampy anao hahatratra ny tanjonao
Sakafo 8 ora
Ity sakafo ity dia tsy vaovao, na dia izany aza, ny fomba fanao dia mety hahatonga anao hisarika ny sainao hanandrana azy mandritra ny iray volana
Fantaro ny sakafo isa, fomba mety sy voafehy hampihenana ny lanja isan'andro. Tadiavo ny tetika rehetra hanaovana tsara ity sakafo ity ary ho salama hatrany.
Mampihena lanja amin'ity ranona kôkômbra, paoma ary sakamalao ity
Mialà kilao vitsivitsy noho ity ranom-boankazo ity izay entinay ho anao, hanampy anao eny am-pandehanana ny paoma, kôkômbra ary sakamalao.
Ny sakafo mediteraneanina dia karazan-tsakafo tolo-kevitra indrindra ho an'ny fahasalamana noho ny tombontsoa marobe entin'ny vatana. Fantaro ny fomba hanaovana an'ity sakafo ity TSARA.
Ny sakafo malemy dia manolo-tena amin'ny fihinanana vokatra malefaka toy ny porridges, paty, voankazo masaka na legioma nandrahoina. Jereo ny sakafo voazava tsara.
Ny sakafo voasarimakirana dia mety hanombohana mampihena ny lanjany, maro ny olona mitady fomba iray hampihena ny volony ary iray amin'izany izy ireo
Izay tokony hohanin'ny lehilahy aorian'ny 50 taona
Azavainay izay sakafo tsara indrindra ho an'ny lehilahy mihoatra ny 50 taona ary nahoana.
Sakafo tsara indrindra hampihenana lanja
Fantaro hoe iza no sakafo tsara indrindra hampihenana lanja sy hahazo vatana mangetaheta
Sofrito, ny tsiambaratelon'ny sakafo Mediteraneana?
Ny sofrito dia mety ho tsiambaratelo momba ny fahasalaman'ny mponina any Mediterane raha oharina amin'ny ambiny. Antony bebe kokoa hanomanana an'io saosy io, eto.
Inona no hohanina aorian'ny 40 taona
Ny sakafo manomboka amin'ny faha-40 taonany dia tokony samy hafa amin'ny fanajana ny fahazazana, ny roapolo ary ny telopolo. Eto izahay dia milaza aminao izay laharam-pahamehana.
Aza adino ny antsipiriany ary soraty izay ateraky ny sakafo scardale malaza ary inona ny tombony sy fatiantoka amin'ny fanarahana an'ity drafitra fihenan-danja ity.
Garcinia Cambogia, atoro anao sa tsia?
Ny mahatsara sy maharatsy ny fihinanana Garcinia Cambogia, famenon-tsakafo izay mbola tsy nanaporofo ny fahombiazany tamin'ny fisedrana ara-pitsaboana.
Ny regimen miorina amin'ny quinoa
Quinoa dia zavamaniry ahitra. An'ny fianakavian'i Chenopodiaceae izy io, ary voa an-jatony maro, manankarena amin'ny proteinina legioma.
Sakafo ho an'ny olona mipetrapetraka
Ny olona mandalo fotoanan'ny asa be, ary noho izany dia mitarika fomba fiaina mipetrapetraka, satria tsy manao fanatanjahan-tena izy ireo, mety ho very lanja ihany koa ary hikarakara ny laharana.
Manolotra anao ny fomba fahandro hihinananao ny voky, ary tsy mampatavy izany: ovy nopotsehina miaraka amin'ny trondro.
Sakafo manimba ny fo
Miankina amin'ny sakafontsika ny fahasalaman'ny fo, satria miankina amin'ny fihinanana sakafo matavy be ...
Sakafo zaza, zava-misy sa foronina?
Fitsapana ny finoana isan-karazany momba ny famahanana zaza sy ny sakafo mahavelona.
Sakafo samihafa sy fifehezana lanja
Ny ankamaroan'ny sakafo dia mitady amin'ny alàlan'ny fifehezana ny gliosida sy ny menaka, hitazomana na mampihena ny ...
Rashes sy detox
Matetika ny tanjon'ny sakafo detox dia ny fanalana ny vatanao amin'ny zavatra simika sy poizina, fa ...
Sushi, tombony ary fihoarana
Nanjary lovia lamaody be indrindra eran'izao tontolo izao i Sushi ary noraisina tsara, ...
Vary sy proteinina
Ny proteinina dia tsy hita amin'ny vokatra hena na ny derivatives toa ny atody sy ny ronono, fa koa ...
Fambara an'ny detox sakafo
Raha ny filazan'ny manam-pahaizana manokana dia mitondra tombony mahasalama maro ny fanapoizinana voajanahary satria ny fanafoanana ny poizina dia mandrisika ny ...
Compote voankazo; safidy tena mahasalama
Namboarina tao an-trano misy akora voajanahary sy kalitao, ny compote voankazo dia manolotra tombony lehibe amin'ny sakafo, toy ny ...
Ny fitondrana vohoka dia dingana miavaka iray ahafahanao mivoatra amin'ny tsy fankafizanao ny sakafo tianao sy ny faniriana ...
Sakafo ara-pahasalamana salama; tortillas varimbazaha
Raha te hifehezana na hampihena ny lanjan'ny vatana ianao, anisan'izany ny tsakitsaky salama na tsakitsaka no safidy tsara indrindra, satria ...
Ny fihinanana vovo-katsaka na vovoka katsaka dia tsy vitan'ny hoe marary ianao, fa mety hanondro koa ny fisian'ny aretina mampidi-doza, ...
Voaloboka; ny sakafo tsara indrindra ho an'ny ankizy
Ny voaloboka amin'ny fitsaboana voajanahary dia nampitahaina tamin'ny endriny, amin'ny rononon-dreny, noho izany dia ampirisihina hampiditra azy ireo ...
Ny vehivavy bevohoka dia tokony hihinana sakafo mahasalama mba hanomezana vitamina sy otrikaina ilaina ho an'ny zanany, ary koa ...
Tombontsoa azo avy amin'ny molotra
Ny molaka dia singa iray azo avy amin'ny fary, izay ahazoana ny siramamy ...
Ny voasarimakirana dia manana tombony maro toy ny fandraisana anjara ara-tsakafo, ny lovia isan-karazany ahafahana miomana sy ny vidiny ambany ananany.
Sakafo omelette anana ho an'ny asidra urika avo
Ity fomba fahandro omelette anana ity dia tena tsara ho an'izay rehetra mijaly amin'ny asidra urika avo ka ...
Malama mangahazo malefaka amin'ny thermomix
Ity dia zava-pisotro maivana, tsotra be ny manamboatra azy ary mila manamboatra azy ianao dia mila singa vitsivitsy ary koa ...
Sakafo ara-tsakafo hampihena ny lanjany ao anatin'ny 5 andro
Ity dia fomba fanao amin'ny sakafo noforonina indrindra ho an'ireo olona mila mampihena ny lanjany ary haingana ireo kilao izay ...
Sakafo sodium ambany na menio isan'andro
Ity dia fomba fanao amin'ny sakafo izay naseho indrindra ho an'ireo olona rehetra izay, ankoatry ny fihenan'ny lanjany, manana ...
Fomba fahandro mofomamy misy amandy ho an'ny diabetika
Ity mofomamy matsiro miaraka amin'ny amandy ity dia sakafo mety indrindra ho an'ny diabeta rehetra mba hanandrana amin'ny fotoan'ny sakafo maraina.
Recipe legioma gratin ambany kaloria
Ho anao hampidirina amin'ny sakafo ambany kaloria, dia hanomana legioma vanim-potoana matsiro miaraka amin'ny saosy fotsy mihena amin'ny ...
Sakafo astronaut, very 3 kilao ao anatin'ny 3 andro
Ny sakafon'ilay mpanamory sambon-danitra dia manana ny anarany avy amin'ny fitovizany amin'ireo efa ampiharina amin'ny mpanamory sambon-danitra ...
Sakafo tsy misy kaloria 200
Raha eo amin'ny tontolon'ny sakafo mahavelona sy ny sakafo ianao dia fantatrao fa ny sakafo maraina no ...
Salady laisoa sy karaoty fotsy
Ity salady ity dia hanome anao vitamina A, B, B3, C, E, ary mineraly toy ny potasioma, manezioma, iode ary kalsioma ankoatry ny roa ...
Mampihena ny sakafon-kibo
Fanomezana sakafo hafa no arosoko ho anao, amin'izay tsy ho very fotsiny ny 4 kilao ao anatin'ny herinandro, fa ...
Very 7 kilao ao anatin'ny 25 andro amin'ny fihinanana sakafo mahasalama
Raha manana kilao fanampiny fanampiny ianao ary te hampihena ny lanjanao, dia entiko aminao ny iray amin'ireo fomba fahandro tena ...
Sakafo manaitaitra ny fihenan-danja
Raha iray amin'ireo olona afaka mifehy tena amin'ny resaka sakafo ianao dia hoentiko ho anao ity ...
Very hatramin'ny 12 kilao ao anatin'ny 2 volana
Raha te hihena tsotra izao ianao, fa tsy maika, ity sakafo atolotray anao ity dia ny ...
Mampihena lanja amin'ny fisotroana seleria, kôkômbra ary ranon'ny karaoty
Jiro ity izay tsotra be fotsiny, manana tsiro matsiro ary natao ho an'ny rehetra ...
Voaroy frezy sy voanjo
Ity dia malama malefaka manana tsiro matsiro, tsotra ny fomba fahandro azy, tsy misy akora maro ...
Ny maha-zava-dehibe ny legume
Ny legioma dia misy proteinina be dia be; ny soja dia mihoatra ny legume hafa amin'ireny ary manana ny asidra amine ilaina rehetra, ka izany no mahasolo azy tsara ny hena ary manana ny proteinina bebe kokoa aza ny avy aminy. Na dia ambany kalitao kokoa aza ny proteinina soja raha oharina amin'ny proteinina ho an'ny biby, (satria misy tsy fahampiana amin'ny asidra amine toa ny methionine, cysteine ​​ary tryptophan), dia tsy manome fatiantoka izany.
Tombontsoa azo avy amin'ireo dite ahitra 7 ho an'ny fihenan'ny lanja
Ity fampidirana antsoina hoe ny dite an'ny ahitra 7 ity, dia be mpampiasa amin'ny sakafo mampihena lanja, amin'izao ...
Tombony amin'ny tsimoka
Ny tsimoka dia azo ary mamboly ny voa, izay misy ny embryon izay misy sakafo hafa miangona izay mora levona kokoa. Azonao atao ny manamboatra tsimoka serealy, legume, voa, legioma ary zavamaniry fanafody sasany, fa ny fijerena manokana ireo izay mety misy poizina, voatabia na tsimoka ovy dia mety misy poizina. Alfalfa, orza, soja na tsaramaso sinoa no be mpampiasa indrindra ary mamokatra tsimoka avo lenta.
Very 5 kilao ao anatin'ny 1 herinandro miaraka amin'ny sakafon'ny Buddha
Ity dia sakafo noforonina indrindra ho an'ireo olona mila very ireo kilao fanampiny sy ...
Mampihena lanja amin'ny fisotroana dite gotu kola
Ireo olona rehetra mila manao drafitra sakafo hanary ireo kilao fanampiny sy ohatrinona ...
Sakafo legioma hanary 5 kilao ao anatin'ny 15 andro
Ity dia sakafo natao manokana ho an'ireo olona mila very kilao fanampiny. Io dia…
Sakafo maodely ho an'ny vehivavy matotra
Taorian'ny faha-50 taonany, tamin'ny fahatongavan'ny fadim-bolana ho an'ny vehivavy, ny vatana dia tsy mandany kaloria betsaka, ...
Tombony azo amin'ny fihinanana tamarillo na voatabia hazo
Ny tamarillo, antsoina koa hoe voatabia hazo, dia voankazo maniry amin'ny faritra tropikaly toa an'i Colombia sy Brezila ...
Malama sy malama tantely hahazoana lanja
Ity malama sy akondro ary tantely ity dia mety indrindra ho an'ireo olon-dehibe, tanora ary koa ankizy izay ...
Voasarimakirana, frezy ary ranom-boasarimakirana
Ity ranom-boasary makirana sy frezy ary voasarimakirana ity dia noforonina indrindra ho an'ireo ...
Mampihena lanja amin'ny fisotroana ronono katsaka
Ity dia zava-pisotro maivana izay tsotra be hatao, miaraka amin'ny tsiro matsiro ary natao h ...
Strawberry, diuretic ary detoxifying fananana
Ny frezy dia misy rano mihoatra ny 90% ary tsy dia misy tavy sy gliosida firy, noho izany dia manome kaloria kely dia kely ary tena atolotra amin'ny sakafo mampihena lanja. Ny votoatin'ny sodium ambany sy ny harenany lehibe amin'ny calcium sy potassium, ary koa ny singa hafa (arginine) dia manome azy ireo toetra diuretic ary ampy hisorohana ny fihazonana ny tsiranoka, ny aretina rheumatic na gout, ankoatry ny hafa. Noho ny fatran'ny siramamy ambany dia sakafo sahaza ho an'ny olona diabeta io, ankoatry ny fanolorana toetoetra manapoizina.
Malama malama frezy amin'ny thermomix
Ity dia fihomehezana maivana izay tena matsiro sy mamelombelona fa miaraka amin'ny fanampian'ny thermomix ...
Mampihena lanja amin'ny Garcinia Cambogia
I Garcinia Cambogia dia kirihitra maniry any India atsimo; Ny ampahany ampiasaina amin'ity zavamaniry ity dia ny pulp sy ny hodi-kazo, ity farany kosa dia misy fitsipika mavitrika toy ny anthocyanosides sy asidra hydroxycitric. Ny asidra Hydroxycitric dia naseho fa tafiditra amin'ny fifehezana ny lanjan'ny vatana sy ny fifehezana ny hanoanana noho ny vokany mahafa-po, miaraka amin'ny fihenan'ny fihinanana sakafo. Ho fanampin'izany, mampihena ny kolesterola sy ny famokarana triglyceride ao amin'ny vatana io akora io.
Ny Whey dia avy amin'ny fifangaroan'ny ronono ary mifangaro vitamina, mineraly ary be proteinina. Misy koa serum vita amin'ny kefir. izay miaraka amin'ny ronono dia manatsara ny tombotsoan'ity farany. Manome mineraly toy ny calcium, manezioma, manganese, sodium, potassium sy phosforus ary vitamina A, group B (B1, B2, B3, B5, B6), C, D ary E. Ny proteinina ao anaty whey dia manana kalitao biolojika avo ( ambony noho ny atody) satria misy ny asidra amine ilaina rehetra. Anisan'izany, misongadina ireo rojo branched sy glutamine.
Sakafo paoma voaendy
Ity dia sakafo mety indrindra ho an'ireo olona mila mampihena ny lanjan'ny kilao sy izay ...
Sakafo voasary sy paoma
Ity dia fomba fanao amin'ny sakafo noforonina indrindra ho an'ireo olona mila very ireo kilao fanampiny ...
Mampihena lanja amin'ny fihinanana kely
Ity dia fomba fanao ara-tsakafo izay natao manokana ho an'ireo olona mila mampihena kilao fanampiny ...
Sakafo laxative ity izay natao manokana ho an'ireo izay mijaly amin'ny aretina antsoina hoe ...
Detoxify ao anaty 1 andro amin'ny fihinanana paoma
Ity dia sakafo natao manokana ho an'ireo mila manala haingana ny vatany. Drafitra ...
Mampihena lanja amin'ny fihinanana lasopy voatavo
Ity dia fomba fanao amin'ny sakafo novolavolaina manokana ho an'ireo olona mila very kilao fanampiny ...
Tombony azo amin'ny fihinanana risotto
Risotto dia sakafo avy any Italia izay manana tsiro matsiro, amboarina amina ...
Tombontsoa azo avy amin'ny varimbazaha bulgur
Ny varimbazaha bulgur dia singa iray ampiasain'ny olona marobe avy amin'ny firenena samihafa noho ny ...
Mampihena lanja amin'ny fihinanana lasopy asparagus
Ity dia fomba fanao amin'ny sakafo natokana ho an'ireo olona mila very kilao fanampiny ...
Borojo dia voankazo tropikaly iray lanin'ny olona marobe ankehitriny, ...
Nalaina ny tsaramaso fotsy, manohitra ny hatavezina
Ny fakana tsaramaso fotsy dia mampiroborobo ny fihenan'ny lanja amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fitrohana gliosida avy ...
Very lanja 1 kilao nefa tsy mihinana lafarinina
Ity dia fomba fanao amin'ny sakafo natokana ho an'ireo olona mila lanja 1 kilao izay ananany ...
Sakafo pasteky 1 andro
Ity dia fomba fanao ara-tsakafo izay maharitra fotoana fohy ary hanampy anao hanadio ny vatanao amin'ny endrika ...
Watermelon sy sakafo akoho
Ity dia fomba fanao amin'ny sakafo noforonina indrindra ho an'ireo olona mila mihena haingana ireo kilao izay ...
Mampihena lanja ao anatin'ny 4 andro amin'ny fihinanana lasopy legioma
Ity dia sakafo novolavolaina manokana ho an'ireo olona mila very kilao fanampiny. Io dia…
Ampiasao ny lanja amin'ny fihinanana voankazo soisa sy voatavo nandrahoina
Torohevitra voajanahary hiadiana amin'ny aretin'akoho
Ny aretin'akoho dia aretina mahazatra ankehitriny, hita matetika kokoa amin'ny zazakely sy ...
Mampihena lanja amin'ny fihinanana lasopy chard sy tongolo
Ity dia fotoana fohy ary tena tsotra tanterahina. Natao indrindra ho an'ireo rehetra ...
Sakafo salady zavokà, salady, voatabia ary karaoty
Ity dia sakafo natokana indrindra ho an'ireo olona mila very kilao fanampiny….
Sakafo miparitaka 5 andro
Mampihena lanja amin'ny fihinanana sakafo nahandro
Ity dia sakafo tena tsotra entina ary natao indrindra ho an'ireo olona mila mihena ...
Sakafo 1 andro hanalana ny atiny
Ity dia sakafo izay tena tsotra ampiharina, natao indrindra ho an'ireo olona rehetra izay ...
Mampihena lanja amin'ny fihinanana lasopy artichoke
Sakafo tsotra hotanterahina ity, namboarina manokana ho an'ireo olona rehetra mila very kilao vitsivitsy ...
Sakafo paoma maintso nahandro
Mampihena lanja amin'ny fihinanana gelatin maivana sy volon-koditra voajanahary
Ity dia fomba fanao amin'ny sakafo noforonina indrindra ho an'ireo olona mila very kilao fanampiny….
Sakafo hanadio ny vavony
Ity dia sakafo natao manokana ho an'ireo olona mila manadio ny vavony. Drafitra tsotra an'ny ...
Sakafo hanadio ny tenanao ao anatin'ny 1 andro amin'ny fihinanana voasary
Ity dia sakafo hanadio ny vatanao tena mora azo ampiharina ary maharitra fotoana fohy. Ity dia…
Very 3 kilao ao anatin'ny 10 andro amin'ny fihinanana yaourt ambany tavy
Diovy ao anaty 1 andro ny fampidiran-drano
Ity dia fitondrana ideolojika izay manana tanjona hanadio haingana ny vatan'ny olona. Io dia…
Mampihena lanja amin'ny fihinanana empanadas katsaka
Ity dia fomba fanao amin'ny sakafo novolavolaina manokana ho an'ireo olona rehetra manana kilao fanampiny sy ...
Ny mineraly makro sy bitika
Araka ny hitantsika teo aloha, ny mineraly dia singa iray izay tsy maintsy misy amin'ny vatan'olombelona mba ...
Sakafo ho an'ny olona tratry ny fitohanana
Araka ny hitantsika teo aloha, ny fitohanana dia aretina atrehin'ny olona maro tsy miankina amin'ny ...
Sakafo 300 kaloria
Ity dia fomba fanao amin'ny sakafo natokana ho an'ny olona rehetra mila very kilao fanampiny ...
Sakafo miorina amin'ny melon 1 andro
Ity dia fomba fitsaboana mifototra amin'ny fihinanana melon, natao indrindra ho an'ireo rehetra mila ...
Ity dia fomba fanao ara-tsakafo izay natao manokana ho an'ireo olona mila lanja iray kilao izay ananany ...
Sakafo 2700 kaloria
Ity dia fomba fanao ara-tsakafo izay natao manokana ho an'ireo mila mihazona ny lanjany. Tena ...
Mampihena lanja amin'ny fihinanana mackerel soavaly
Ity dia fomba fanao amin'ny sakafo noforonina indrindra ho an'ireo olona te ho very ireo kilao fanampiny ...
Mampihena lanja amin'ny fihinanana omelette ovy
Ity dia sakafo noforonina indrindra ho an'ireo olona mila mampihena ny lanjany 1 kilao fotsiny ...
Sakafo pie chard
Ity dia fomba fanao ara-tsakafo tena tsotra ampiharina, hanampy anao hampihena ny lanja azonao ...
Ampiasao ny lanja amin'ny fihinanana paty sarda
Ity dia fomba fanao amin'ny sakafo noforonina indrindra ho an'ireo olona mila mampihena lanja fanampiny kilao vitsivitsy ...
Sakafo croquettes vary
Ity dia fomba fanao amin'ny sakafo natao manokana ho an'ireo olona rehetra mila manary kilao vitsivitsy ananan'izy ireo ...
Sakafo ovy mamy nandrahoina
Tombony mipoitra ny orza
Ny fitsimohan'ny orza dia sakafo izay manana fananana be dia be ary mamokatra tombony tsy tambo isaina amin'ny ...
Molybdenum dia mineraly manokana izay tsy maintsy misy eo amin'ny vatan'ny olona rehetra na inona na inona ...
Torohevitra voajanahary hiadiana amin'ny ischemia cerebral
Ny ischemia cerebral, fantatra amin'ny anarana hoe tsy fahampian-drano, dia aretina mahatsiravina izay iharan'ny ...
Sakafo ranona 1 andro
Ity dia sakafo fisotro misy ranoka natao ho an'ireo olona rehetra mila manala haingana ny vatany sy manadio ...
Sakafo ho an'ny mpitan-tsoratra
Ity dia sakafo noforonina indrindra ho an'ireo vehivavy miasa ho sekretera ary mila manary kilao vitsivitsy ...
Sakafo mifototra amin'ny tuna sy paoma
Ity dia fomba fanao amin'ny sakafo natokana ho an'ireo olona mila very ireo kilao fanampiny ...
Mampihena lanja amin'ny fisotroana karaoty sy ranom-boasary
Ity dia fomba fanao ara-tsakafo izay natao manokana ho an'ireo olona mila mihena haingana kilao vitsivitsy izay ...
Sôkôla; hampiakarana fiarovana voajanahary
Fantatsika rehetra fa ny sôkôla dia manome fahatsapana fiadan-tsaina miavaka ary mitodika any aminy isika amin'ny fahafinaretana ...
Tuna sy karaoty sakafo fihinana
Sakafo hiadiana amin'ny gastritis amin'ny adolantsento
Ity dia sakafo natao manokana ho an'ireo tanora tanora tratry ny aretina antsoina hoe gastritis….
Sakafo 2200 kaloria